Uthathe isicoco emncintiswaneni wokupheka
UNKSZ Zandile Makhoba obashaye bonke emakhanda ngokupheka Isithombe: INSTAGRAM
Nonhlanhla Mbonambi | December 23, 2021
UFISA ukubakhela amathuba abathanda ukudla njengaye umpheki nosomabhizinisi waKwaZulu-Natal uNksz Zandile Makhoba obashaye bonke emakhanda ngesikhathi ewina ohlelweni lokupheka iColour Your Plate with KOO.
Uklonyeliswe ngo-R50 000 nezinye izipho ezinhle zakwaKOO, wathatha nesicoco sokuba umpheki ohamba phambili kulo mncintiswano eziqeshini ezimbili zokugcina ezidlale ngoLwesithathu nangoLwesihlanu olwedlule kuSABC 2.
UNksz Makhoba uthe ukujabulele kakhulu ukuphuma phambili kulo mncintiswano ufisa nokubona ukuthi kuzomthatha kumbekephi kwezokupheka, futhi unesifiso sokwenza umsebenzi oncomekayo kwezokupheka akhele nabantu abathanda ukudla njengaye amathuba. Uzoqhubeka nokuthuthukisa imiphakathi ngokusebenza ngaphansi kwenhlangano yakhe iZandi The Chef International.
“Ukuthatha isicoco sokuba umpheki oqavile eMzansi kusho lukhulu kimi noma bengingakulindele. Ngifunde okuningi ngokupheka ngosizo lwamajaji, ngafunda nangokubaluleka kokwenza ukudla okuhlukene nokunempilo engingakudla nsuku zonke uma ngipheka ngeKOO,” kusho uNksz Makhoba.
UNksz Makhoba umangaze amajaji okubalwa kuwo nosomabhizinisi owaziwayo uNkk Basetsana Khumalo, umpheki odumile uMnuz Reuben Riffle nombhali wezincwadi oyisazi sokudla uMnuz Thabang Ramoroko.
Bancome kakhulu ikhono lakhe lokupheka, nokuhlobisa ukudla okunempilo ngemibalabala kuhalise. Ikhono lakhe lenze abathandi bokudla ababukela lolu hlelo masonto onke, bafunda kuye ukupheka izidlo ezihlukene ezinsukwini eziyisihlanu ngesonto bepheka ngeKOO exutshwe nezithelo ezimbili nemifino emithathu.
Umqondisi wokuthengisa kwaSABC 2 uMnuz Edna Mohale, uthe bayaziqhenya kakhulu ngoZandile ngokuba owokuqala ukuwina lo mncintiswano. Ukwazile ukutshengisa ikhono lakhe elincomekayo, waqhamuka nezidlo ezinempilo ezintsha ezihlabe umxhwele iningi lababukeli.
Uthe uhlelo lubasizile ngokwenza umsebenzi wabo, wokukhuthaza abathengi beKOO ukuthi badle ukudla okunempilo nsuku zonke, bapheke nezidlo ezehlukene eziconsisa amathe.
“Siyaziqhenya ngendima edlalwe yilolu hlelo kwezokupheka. Belungagxilile kuphela ekutshengiseni ikhono labapheki abangaziwa eNingizimi Afrika, kodwa liqale nohlelo lokunikela ngomfundaze kubapheki abasebancane ukuze [/bafunde eJackie Cameron School of Food and Wine ukudlondlobalisa amakhono abo. Bazobe beqeqeshwa omunye wabapheki abaseqophelweni eliphezulu uMnuz Reuben Riffle,” kusho uMohale.
Uthe bakujabulele nokunikela nokuthuthukisa abantu abanamakhono okupheka, babakhele namathuba kwezokupheka.
Bazoziqhola ngesiqholo esenziwe abeBrutal Fruit